Miaro Tena Amin’ireo Fiampangàn’i Esperanza Aguirre Ny Kiobàna · Global Voices teny Malagasy
Miaro Tena Amin'ireo Fiampangàn'i Esperanza Aguirre Ny Kiobàna
Voadika ny 12 Janoary 2013 8:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Português, Español
Tsy ela loatra talohan'ny faran'ny taona, nilaza tamin'ny gazety Espaniola ABC [es] ny filohan'ny antokom-bahoaka (Partido Popular-PP) ao Madrid, Esperanza Aguirre, fa tsy nankatò ny “fitsaràna tao Kiobà izy, na endrika ahoana na ahoana.” Nantsoiny hoe “fampijaliana” ny fotoana lanin'i Ángel Carromero, Sekretera lefitry ny Sampana Tanora ao amin'ny Antokom-bahoaka tany am-ponja, taorian'ny nanamelohana azy efatra taona an-tranomaizina tao La Havane noho ny “famonoana olona tsy niniana,” tanaty lozam-pifamoivoizana izay nahafaty an'ireo Kiobàna mpanohitra, Oswaldo Payá sy Harold Cepero.
Tanaty lahatsoratra iray [es] nivoaka tao amin'ny tranonkala miteny espaniola Cubainformación [es], José Manzaneda manazava hoe :
José María Viñals, de Lupicinio Abogados, entidad española que coordinó la defensa de Carromero junto a letrados cubanos, afirmó que el procesado “no se quejó del trato (en prisión)”, y que “los letrados cubanos y yo (…) pudimos trabajar de forma independiente”. El cónsul general de España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, semanas antes, calificó el juicio celebrado en la ciudad de Bayamo como “correcto”, “limpio” y “procesalmente impecable”.
José María Viñals, avy amin'ny Lupicinio Lawyers, kabinetranà mpisolovava espaniola izay nandrindra ny fiarovana an'i Carromero niaraka tamin'ireo mpisolovava Kiobàna, dia nanamafy [es] fa “tsy nitaraina mikasika ny fomba nitondràna azy (tao am-ponja) ny voampanga” sy hoe “afaka niasa (…) tamin'ny fomba tsy nisy teritery ireo Kiobàna mpisolovava sy ny tenako.” Ny Kaonsily Jeneralin'i Espaina ao Kiobà, Tomás Rodríguez Pantoja, herinandro maro tany aloha, dia namaritra [es] ilay fitsaràna izay natao tany tanànan'i Bayamo ho “araka ny tokony ho izy,” “madio,” sy “tsy misy kianina raha ny lafiny dingana narahana.”
Iroel Sánchez, Kiobàna biloagera mpanoratra ny La Pupila Insomne [es] (Ilay Mpianatra Tsy Pizin-tory) dia nanindry izao manaraka izao :
Namoaka lahatsoratra masiaka tao amin'ny ABC tany Madrid i Aguirre mamely ny governemanta Kiobàna, tsy misy hafa amin'ny fomba manambàny efa mahazatra azy iantsoany an'ireo Espaniola tofoka ho “fikambanan-jiolahy sy mpanakorontana.”
Avy amin'ny La isla desconocida [es] (Ilay Nosy Tsy Fantatra), Enrique Ubieta, Kiobàna avara-pianarana iray, dia mihevitra [es] fa “hahazo fahafahana araham-pepetra ihany i Carromero na hotazonina aminà toerana tsara ambina” ary “hahena ho zàra fa misy” ny saziny. Na izany aza, nanangana izao fanonaniana izao ihany izy momba ny “fanamby lavitr'ezaka kokoa: hanampina maso amin'ireo heloky ny lasany ve ny PP ka hamerina azy indray ho ao anatin'ny hoavy politikan'i Espaina?”
Ny bilaogy sasany namorona sariitatra maneho an'i [es] Aguirre (“Ry Anjeliko! Raha mba mahafaty Kiobàna roa monja mantsy aho izao an!”), raha ny hafa kosa indray manakiana [es] ny fomba fitantanany ny vondrom-piarahamonina ao Madrid:
Esperanza Aguirre. Sary nalaina tao amin'ny Wikimedia Commons eo ambany lisansa CC 2.0.
Ary averiko ny fanontaniako: Iza ity Esperanza Aguirre ity? Ilay ramatoa, izay vantany lany ho filohan'ny Vondrom-Piarahamonina tao Madrid, dia nanafoana ny vaksiny maimaim-poana natao ho fanefitry ny aretina “pneumocoque” ka hatramin'ireo tolotra fiahiana ara-pahasalamana hafa ihany va re ; vavolombelon'ny fanaovana ny maro tamin'ireo rafitra fiahiana ara-pahasalamana ho lasa an'ny tsy miankina sy ny fiharatsiana niandalan'ny tombontsoa ara-pahasalamana tokony ho an'ny vahoakafony teo ambanin'ny fitantànany ireo mponina ao Madrid.
Tonga tao Madrid ny Sabotsy 29 Desambra i Carromero, tao anatin'ilay fifanarahana voasonia tamin'ny 1998 teo amin'ny firenena roa tonta izay mamela ny olona voasazy hanefa tanteraka ny saziny any an-tany niaviany.
Però 5 andro izay
Kolombia 7 andro izay